Cuntada Iswiidhen oo qaali noqotey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cuntada Iswiidhen oo qaali noqotey
La daabacay tisdag 13 augusti 2013 kl 12.08
Sannadyadan danbe cunada ayaa Iswiidhen qaali noqotey. Qiimaha cunada ayaa kor u kacdey 3,3 procent laga soo bilaabo bishii julay sannadkii hore. Sidaas waxaa muujinaya macluumad uu soo saarey caafiiska dhaxe ee tirkoobka (SCB).
Laakiin guud ahaan waddanka lagama dareemayo wax sicir barar ah, waxaase badelkeeda hoos u dhacay qiimaha badeecaddo kale oo badan. Qiimaha badeecaddaha ayaa hoos u dacay 0,1 procent tan iyo bilihii jun iyo julay sannadkan aynu ku jirno. Badeecadaha sida weyn u raqiisoobey ayaa ah dharka iyo kabaha kuwaas oo qiimahooda hoos u dhacay boqolkii 7,4.
Sidoo kale dulsaaraha ay qoysasku bixiyaan ayaa hoos u dhacay. Iyadoo dhanka kale ay raqiisoobeyn badeecaddaha konrantada ku shaqeeya ee guriyaha laga isticmaalo, sida mashiinada dharka lagu dhaqo, tv:yada iwm. Qiimo jabka badeecadahan ayaa ah boqolkii 12
Balse waxyaabaha qiimahooda ay kordheen kasakow cunada iyo qarashadka maqayadaha waa kirooyinka guriyaha laga bixiyo.